Vaovao - inona ny fahasamihafana misy ny tombo-kase sy ny vovoka vy?
Fahasamihafana amin'ny tombo-kase mitondra metaly sy vy
Hafa ny fiasa
- mitondra peratra tombo-kase dia ny fahombiazan'ny famehezana ary ny fiainana serivisy dia manan-danja lehibe.
- Ny firakofana vovoka dia ny fisorohana ny fiterahana ao anaty vovoka sy potipoti-javatra hafa ka misy fiantraikany amin'ny asa.
Hafa ny fitaovana,
mitondra peratra famehezana dia vita amin'ny fingotra. Ny akora misy fonony tsy misy vovoka dia lovia metaly manify.
Ny satroka vovoka dia trano fonenana iray, matetika no voahidy avy amin'ny ravina vy manify, izay mifatotra amin'ny peratra iray na Washer amin'ny fiakarana ary manitatra mankamin'ny peratra na Washer iray hafa, manarona ny habaka anatiny misy ny birao nefa tsy mifandray amin'ny peratra hafa na Mpanasa lamba.
Ny iray dia porofon'ny vovoka, ny iray kosa mandeha amin'ny rivotra. Ny fisorohana vovoka dia ny fisorohana ny vovoka ao anaty atin'ny motera; voaisy tombo-kase tsy ny vovoka ivelany ihany no tsy afaka miditra ary ny menaka anatiny dia tsy mora mivoaka. Ny menaka izay tsy madio ivelany dia tsy mora mikoriana.
Amin'ny fampiharana ny fahasamihafana misy eo amin'ny roa dia tsy lehibe loatra. Ny bearings amin'ny ankapobeny dia ao anatiny sy ivelan'ny satron'ny solika, dia nilalao an'io andraikitra io, raha tsy amin'ny fepetra manokana ilaina ihany. Z ho an'ny vovoka ary S ho an'ny tombo-kase (FS ho an'ny tombo-kase peratra ary LS ho an'ny tombo-kase fingotra).